RASMI: Laurent Koscielny oo ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah – Gool FM
RASMI: Laurent Koscielny oo ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah
(France) 14 Okt 2018. Difaaca xulka qaranka France iyo kooxda Arsenal ee Laurent Koscielny ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu isaga fariistay ciyaaraha caalimga ah, xili da’adiisu ay haatan gaarsiisan tahay 33 jir.
Laurent Koscielny ayaa ka maqnaa liiska xidigaha xulka qaranka France koobka aduunka 2018 ee dalka Russia, sababa la xiriira dhaawac daran ee kasoo gaaray dhanka jilibka.
Xidiga reer France ayaa kadib ku dhawaaqistiisa inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah wuxuu weerar ku qaaday tababare Dechamps, sababa la xiriira inuusan ku dhiira galinin inuu kasoo kabto dhaawacii uu ka qabay dhanka jilibka.
“Wuxuu ila soo hadlay bishii Sebtembar, si uu iigu hambalyeeyo sanadguurada dhalashadeyda, laakiin marka intaas laga reebo ma jirto markale uu ila soo xiriiray”.
“Waxay ila tahay inaan ku soo bandhigay xulka qaranka France wax walba ee awoodeyda tahay, waxaan ciyaaray 2 euro iyo Koobka Aduunka , xulka haatan wuxuu heystaa jiil aad u wanaagsan, dhaawicigeygu waxba kama uusan beddelin go’aankeyga”.
Mid ka mid ah halyeeyada xulka qaranka Netherland oo kala taliyay Hazard mustaqbalkiisa kooxda Chelsea